Home » သတင်း » Plura အသံလွှင့်: 4K ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အာရုံစိုက်
နှစ်ပေါင်းတစ်အရေအတွက် Plura အသံလွှင့် Inc က လျှောက်လွှာ၏ဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောအမြင့်ဆုံးအဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နည်းပညာများနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ Plura 4K Xpress UHD / 4K Multi-format နဲ့ဗီဒီယိုက Processor ကိုစစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းစွာနှင့်အနာဂတ် applications များ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များအတွက်ထောက်ပံ့သောယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်အတွင်းမိတ်ဆက်ပြသ NAB 2017, 12K Xpress အားကောင်းတဲ့ Xilinix FGPA chipset ကိုလှည့်ပတ် built ကွောငျးတစ်ဦးအပြည့်အဝသည် Programmable ဗိသုကာအပေါ်အခြေခံသည်ကို Quad SDI (စတုရန်းမိုင်သို့မဟုတ် 2SI) မှ & ဖို့ bi-directional 4G ။ ယင်းအသံလွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် 4K စီမံကိန်းများ၏တောင်းဆိုချက်များလစာတိုးအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်လက်ရှိစနစ်အဒီဇိုင်းများနှင့်စနစ်အချို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများဖန်တီးနိုင်ပါတယ် "အနာဂတ်သက်သေပြ။ "
*မှတ်စု: အဆိုပါ 4K Xpress အောက်တွင်လက်ရှိရရှိနိုင် applications များဟာ SoftKey လိုင်စင်နှင့်အတူလယ်ပြင်၌အဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည်။
4K Xpress 12G-quad 4K Xpress ဗီဒီယိုကို Processor, Quad SDI (စတုရန်းမိုင်သို့မဟုတ် 12SI) မှ & မှ Bi-directional 2G
4K Xpress 12G-HDMI4K ရန် soft Key ကို 12G HDMI 4K - ဖျော်ဖြေမှု upgrade လုပ်လို့ရပါပြီလိုင်စင်
4K Xpress HDMI4K-12G soft Key ကို HDMI 4G မှ 12K - ဖျော်ဖြေမှု upgrade လုပ်လို့ရပါပြီလိုင်စင်
4K Xpress quad-HDMI4K ရန် soft Key ကို Quad HDMI 4K - ဖျော်ဖြေမှု upgrade လုပ်လို့ရပါပြီလိုင်စင်
4K Xpress HDMI4K-quad soft Key ကို HDMI QUAD- ကွင်းဆင်း upgrade လုပ်လို့ရပါပြီလိုင်စင်မှ 4K
4K Xpress 12GDA ဖျော်ဖြေမှု upgrade လုပ်လို့ရပါပြီလိုင်စင် - 12 မှ soft Key ကို 4G 12G ဖြန့်ဖြူး Amplifier x
4K Xpress 3GDA ဖျော်ဖြေမှု upgrade လုပ်လို့ရပါပြီလိုင်စင် -3မှ soft Key ကို 4G 3G ဖြန့်ဖြူး Amplifier x
4K Xpress 3G-12GDA3မှ soft Key ကို 4G 12G upscaling & ဖြန့်ဖြူး Amplifier x - ဖျော်ဖြေမှု upgrade လုပ်လို့ရပါပြီလိုင်စင်
4K Xpress 12G-3GDA 12 မှ soft Key ကို 4G 3G Downscaler & ဖြန့်ဖြူး Amplifier x - ဖျော်ဖြေမှု upgrade လုပ်လို့ရပါပြီလိုင်စင်
4K Xpress 3G-12GHDMIMV 4G & မှ soft Key ကို 3x12G HDMI 4K Multiviewer- ကွင်းဆင်း upgrade လုပ်လို့ရပါပြီလိုင်စင်
4K Xpress 12G-12GHDMIMV 4G & မှ soft Key ကို 12x12G HDMI 4K Multiviewer- ကွင်းဆင်း upgrade လုပ်လို့ရပါပြီလိုင်စင်
အကြားအကူးအပြောင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်နေသည့်အဆောက်အဦလိုက်လျောညီထွေနိုင်ရန်အတွက် က Ultra HD, HD-SDI, ဒါမှမဟုတ်ပင် SD ကဆုံးဖြတ်ချက်တွေသည်အဘယ်မှာရှိ Plura အသံလွှင့် နှင့် 4K Xpress UHD / 4K ဗီဒီယိုကို Processor ကို၏တွဲဖက်မှုနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ် Plura PBM-4K မော်နီတာစီးရီး ပြဇာတ်သို့ရောက်! အဆိုပါ PBM-4K စီးရီး monitor 4096 × 2160 ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအထိကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အပါအဝင်မျိုးစုံအရွယ်အစားအတွက်လာ: 24 "32" 43 "55" & 65 "။ အဆိုပါ 84 "စီးရီးမော်နီတာအုပ်စု၏အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအတော်လေးအထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအံ့မခန်းမော်နီတာထောက်ခံမှု SMPTE 2082, 2x 12G / 3G ရှိ /HDတက်ကြွကွင်းဆက်နှင့်အတူ -SDI သွင်းအားစု, 1 မျိုးစုံအိုင်ပီ & ဖိုင်ဘာ I / O စံချိန်စံညွှန်းများပံ့ပိုးပေးရန် SFP slot က x, 1 HDNI 2.0 x နှင့်အပြင်အခြားအမွေ I / O ရဲ့။
* အ PBM-4K Monitor စီးရီး၏ခြုံငုံသုံးသပ်ရန်:
အားလုံးချောချောမွေ့မွေ့အညွှန်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့တစ်ခုအလိုလိုသိ menu ကနေလက်လှမ်း - အ Plura 4K စီးရီးကိုလည်းအစဉ်အလာဆော့ဖျဝဲ feature မည်, စံကိုက်ညှိ alignment ကို, ချိန်ညှိ colorimetry, gamma ဆုံးမခြင်းနှင့်အသံစောင့်ကြည့်ရေးအတှကျအအသိဉာဏ်ဆက်သွယ်မှုအပါအဝင်အများဆုံး Plura မော်နီတာသို့တည်ဆောက်ပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်။ Plura ရဲ့ထူးခြားတဲ့ ICAC tool ကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ်မှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလိုအလျောက် 4K စီးရီးအပါအဝင် IP ကိုကျော်တစ်ခုလုံးကိုမော်နီတာကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးမျိုးစုံအရောင်-related element တွေကိုအချိန်အဆညှိနိုင်ပါတယ်။ Markertek ၏ * Courtesy
Plura က high-performance ကို Multi-function ကိုမော်နီတာ (84 မှတက် ") ၏ကျယ်ပြန့တစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် Plura 84K နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အင်ဂျင်နီယာအချိန် / ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်အပါအဝင် high-performance ကို Multi-function ကိုမော်နီတာ (4 မှတက် ") ၏ကျယ်ပြန့တစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ Plura ထုတ်ကုန်တစ်ခုဆုံးသောအင်္ဂါရပ်ထား, သာလွန်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်ထူးခြားသောတန်ဖိုးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရကိုဆက်ကပ်။ Plura core ကိုနည်းပညာအပျေါမှာတညျဆောကျအမှန်တကယ်တတ်နိုင် High-end features တွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ဖြေရှင်းချက်စတူဒီယိုနှင့်ဗီဒီယိုမော်နီတာ, စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှု timer နေရာမှာအချိန်-code ကိုပြသမှု & အချိန်-code ကို PCIecards, စမ်းသပ်မှုများနှင့်တိုင်းတာခြင်းကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ, ဇာတ်ကောင် / template ကိုမောင်းနှင်ဂရပ်ဖစ်မီးစက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်စနစ်များကိုခရီးဆောင်ပါဝင်သည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-06-28
ယခင်: Cinegy Huawei ကမီဒီယာတိမ်တိုက်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်ခြင်းကျော်ပြီ
နောက်တစ်ခု: Plura အသံလွှင့်: 4K ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အာရုံစိုက်
Pingback: Plura အသံလွှင့်: 4K ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အာရုံစိုက် - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် 2017 NAB ပြရန်သတင်းများ။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်()
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Plura အသံလွှင့်: 4K ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အာရုံစိုက်" ။ http://www.broadcastbeat.com/plura-broadcast-focusing-on-4k-flexibility/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။